ओलीलाई अध्यक्ष मानेर माओवादी पुनः एकीकरणको प्रयासमा | Dainik Hub Dainik Hub
४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १४:११
काठमाडौं, ४ जेष्ठ – दुई पटक गोप्य रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट गर्नुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले वृहत् एकताको प्रस्ताव पनि राख्नुभएको बुझिएको छ ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बाबुरामले एमालेसँग पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बाबुरामले माओवादी केन्द्रसँग फेरि एकीकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यस्तो एकीकरणमा आफू पनि सामेल हुने बताउनुभएको छ ।
स्रोत अनुसार फेरि पार्टी एकीकरण गर्न माओवादीका तर्फबाट पहल सुरु भएको छ । स्रोत अनुसार जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरु वृहत कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुसँग सम्पर्कमा पुग्नुभएको छ ।
‘केपी ओलीलाई नै अध्यक्ष मान्न तयार छौं’– माओवादीका ती नेताहरुको प्रस्ताव रहेको बुझिएको छ ।
बाबुरामले एकीकरणकाे प्रस्ताव राख्नुहुँदा केपी ओलीले तपाईंले कम्युनिष्ट पार्टी नै छाडिसक्नुभएकाे छ कसरी आउनुहुन्छ भनेर साेध्नुभएकाे थियाे । जवाफमा बाबुरामले ह्रदयेश त्रिपठीकाे उदाहरण दिँदै त्रिपठी कम्युनिष्ट नभए पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा रहनुभएकाे उदाहरण दिनुभएकाे थियाे ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा तेस्रो पटक नियुक्त हुनुभएपछि प्रचण्ड निकट नेताहरुले पार्टी एकताको पहल थालेका हुन् । जानकारहरु भन्छन्– अध्यक्ष प्रचण्डकै इसारामा एकीकरणका लागि माओवादी भित्र आवाज उठ्न थालेको हो । केपी ओलीलाई नै पूर्ण अध्यक्ष मानेर भए पनि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज माओवादीको तल्लो तहसम्मबाटै उठ्न थालेको छ ।
पार्टी एकीकरण नगरेको अवस्थामा आउँदो चुनावमा माओवादी समाप्त हुने धारणा एकीकरण पक्षधरहरुले राख्दै आएका छन् । एमालेसँग एकीकरण गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरुको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने उनीहरुको धारणा छ ।
स्रोत अनुसार एमालेमा रहनुभएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरुसँग पनि माओवादीका नेताहरुले एकीकरणका लागि विशेष पहल गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका एकीकरण पक्षधरहरुले पार्टी एकीकरणको पहल गर्ने विषयमा डा. भट्टराईसँग पनि सघन छलफल गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
विगतमा वाम गठवन्धन बन्दा सुरुमा एमाले र माओवादी केन्द्रको साथमा डा. भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी पनि साथमा थियो । पछि भट्टराईले गठवन्धन छाडेर कांग्रेसको समर्थनमा गोरखामा चुनाव लड्नुभएको थियो । बाबुराम पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरु जस्तै आफ्नो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने अवस्थाले चिन्तित देखिनुहुन्छ । गोरखामा बाबुरामले कांग्रेस या एमालेको समर्थन बिना चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छैन । उहाँलाई फेरि पनि कांग्रेसले समर्थन गरेर चुनाव जिताउने सम्भावना लगभग छैन । यो अवस्थामा एमालेसँग मिलेर मात्र भट्टराईले चुनाव जितेर राजनीति जोगाउन सक्नुहुन्छ ।
भित्रभित्रै एकीकरणको चक्करमा लागेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथिको वाक् हमला केही घटाउनुभएको छ । उता बाबुरामले पनि केही दिन यता प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र हत्या गर्ने तथा घृणा निन्दा फैलाउने प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिने तथा लेख्ने काम घटाउनुभएको छ ।